जुन 2011 मा, AMD संयुक्त K10 GPU Radeon संग एक चिप वास्तुकला छ Llano को आधार, मा, Apu (त्वरित प्रसंस्करण एकाइहरु), श्रृंखला एक को पहिलो लाइन शुरू। तर दुर्भाग्य नयाँ उत्पादन, को घटक यसको सुरुवात को पहिलो प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूलाई, Husky गरेको, कोड-नाम नोटबुक निर्माता र पीसी निर्माता उद्देश्य थियो। तसर्थ, सबैलाई Llano आधारमा आफ्नै व्यक्तिगत कम्प्युटर सिर्जना गर्न, नयाँ पहुँच प्राप्त गर्न आफ्नो पालो लागि प्रतीक्षा थियो प्रोसेसर AMD। Llano Apu शृंखला एक को डेस्कटप संस्करण को आधिकारिक लन्च संग, कूट लिन्कस को पर्खाइ भन्दा छ।
AMD A8-3850: वास्तुकला अवलोकन
कम-शक्ति प्रोसेसर को Brazos आधारित ई श्रृंखला त्वरित जस्तै AMD, फेब्रुअरी 2011 मा जारी लिन्कस वास्तुकला अझ एकीकृत दृष्टिकोण तिर निर्माता को रणनीतिक दिशा बदलिएको चिन्ह लगाइयो। कम्पनी को एक-शृंखला जो, 4-कोर सीपीयू साथ बजार कार्यालय र बजेट पीसी मा हुने संकर चिप्स, को कम दक्षता स्वीकार गर्नेछ भन्ने आशा मा प्रदान गर्दछ निर्मित ग्राफिक्स चिप प्रोसेसर, पहिलो लाइन हो भन्नुभयो। AMD यो क्रान्तिको श्रृंखला A8 र A6 स्वामित्वको, 4-Apu को रिलीज थाले। तिनीहरूले घडी गति र एकीकृत ग्राफिक्स प्रसंस्करण एकाइहरु रूपमा भिन्नता थियो। 320 HD 6530D - कोर को जोडी 400 A8 स्ट्रिम प्रोसेसर ग्राफिक चिप Radeon HD 6550D र A6 छ। Wherein पहिलो दोस्रो Apu छिटो छ किनभने यो 600 443 गर्न मेगाहर्ट्ज को एक उच्च कोर गति छ।
दायरा थप फरक घडी आवृत्ति संग ढाँचाको विभाजन गरिएको छ। 2.9 र गीगा 2.6, क्रमशः (यी मान कारण Cool'n'Quiet गर्न स्ट्यान्डबाइ अवस्थामा कम छन् यद्यपि दुई 4-कोर त्वरित प्रोसेसर माथिल्लो मूल्य दायरा A8 र A6 श्रृंखला, Apu AMD A8-3850 र A6-3650, प्रयोग घडी गति ), र 100 वाट को एकदम प्रभावशाली शक्ति खपत फरक।
दुई जुनियर लाइन प्रतिनिधि, A6-3600 र A8-3800 पनि टर्बो कोर प्रविधिको समर्थन। यो उनको प्रदर्शन गतिशील आफ्नो आवश्यकताहरु आधारमा समायोजन भन्ने हो। 2.1 GHz, 2.4 तिनीहरूलाई अप ल्याउन - A8-3800 2.9 GHz यो वृद्धि टर्बो कोर, र A6-3600 गर्दा 2.4 GHz को घडी आवृत्ति प्रयोग गर्दछ। मात्र 65 वाट - यी संकर सीपीयू उपकरणहरू दुवै धेरै कम शक्ति उपभोग।
एक राम्रो दावी एक डिजाइन आधारमा अस्थायी दर प्रदान गर्ने कर्नेलका, ताराहरु नाम। वास्तविकता मा, यो बस 45-एनएम Phenom द्वितीय को एक सुधार 32-nanometer विज्ञापन संस्करण हो। यो सीपीयू चिप AMD अझै अन्तिम इंटेल कोर संग गरिबी competed जो K10, को पुरानो वास्तुकला आधारित छ भन्ने हो। तर, त्वरित प्रोसेसर लिन्कस एक सुविधा प्रतिस्पर्धा इंटेल चिप्स फरक प्रदान गर्दछ। राम संग अन्तरक्रिया यस दर। को budgetary इंटेल चिप्स आवश्यक 1866 मेगाहर्ट्ज को एक आवृत्ति मा चलिरहेको श्रृंखला DDR3 को समर्थन मा मोडेल को प्रत्येक, र 1333 मेगाहर्ट्ज, छैन। यो स्मृति सीपीयू र GPU प्रक्रिया यन्त्रहरू बीच साझेदारी गरिएको छ हुनाले यसलाई छिटो राम एक हल्का ग्राफिक्स प्रदर्शन बढावा धन्यवाद प्रदान गर्न सक्छन्।
Llano वास्तुकला पनि DirectX भिडियो गतिवर्धन अफलोड को समर्थन को CPU र GPU बिना भिडियो प्लेब्याक अनुमति दिन्छ जो समर्पित एकीकृत भिडियो डिकोडर UVD सामेल छन्।
को A8 र A6 AMD को रिलीज साथै motherboards लागि chipsets को एक जोडी प्रदान गर्दछ A55 र A75 भनिन्छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक RAID र 2.2 ठूलो भन्दा टीबी हार्ड ड्राइव समर्थन गर्दछ, तर प्रिमियम A75 Chipset पनि6जीबी / s मा चलिरहेको,4USB बंदरगाहों3र6SATA गर्न अनुमति दिन्छ।
धारा प्रोसेसर को ग्राफिकल भाग Apu 600 मेगाहर्ट्ज मा 400 को उत्पादन संचालन र सामान्य रजिस्टर एकाइ र tessellation, र 20, बनावट प्रसंस्करण एकाइहरु र 8 ROP5SIMD-ब्लक मा विभाजित।
आर्किटेक्चर को सुविधाहरू
उच्च-अन्त प्रोसेसर AMD A8-3850 $ 135 को लागत अमेरिकी 2-कोर i3-2100 संग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा छ। चिप कि 2.9 GHz एक आवृत्ति मा सञ्चालन4स्टार कोर समावेश गर्दछ। तिनीहरूले 45-एनएम प्रक्रिया अघिल्लो पुस्ता Athlon द्वितीय तुलना गर्न योग्य मर क्षेत्रमा6प्रतिशत वृद्धि प्रदान गर्दछ जो 32-nanometer विज्ञापन प्रविधि, गरेको छन्। प्रत्येक कोर 128KB क्यास स्तर 1 र L2 को 1 एमबी विनियोजन। तेस्रो, Apu मा स्तर ठूलो अनुपस्थित छ।
अन्तर्गत सेरी ए विशेष सिर्जना 905-पिन सकेट FM1 AMD A8-3850, टी। गर्न। उत्पादन भिडियो प्रोसेसर DVI connectors, VGA र HDMI Motherboard गर्न आवश्यक थियो। निस्सन्देह, न जो पछाडि अनुकूलता को अघिल्लो मोडेल सीपीयू AMD र कुनै प्रश्न हुन सक्छ। गर्मी विशेषताहरु संग सकेट मा परिवर्तन भए तापनि परिवर्तन छैन। तिनीहरूले गणना थर्मल पावर चिप अनुरूप देखि सबै अवस्थित कूलर, उपयुक्त हुन जारी गर्नुपर्छ।
साथै, अन्तर्गत थर्मल विसारक एकीकृत छ ग्राफिक्स प्रोसेसर Radeon HD 6550D 600 मेगाहर्ट्ज मा सञ्चालन। यो 850 मेगाहर्ट्ज, द्वारा HD ग्राफिक्स 2000 i3-2100 प्रयोग तुलनामा राम्रो कमजोर देखिन्छ। तर AMD GPU स्ट्रिम प्रोसेसर (400) र बनावट ब्लक (20) इंटेल मा6सानो कार्यकारी मोड्युलहरू संग तुलना को भारी मात्रा प्रदान। A8-3850 i3-2100 किनभने पहिलो चिप दोस्रो मात्र 10-औं संस्करण उपयुक्त हुँदा, DirectX 11 को लागि पूर्ण समर्थन प्रदान गर्दछ, सुविधाहरू मामलामा उच्च पनि छ।
AMD A8-3850 Apu दोहोरो ग्राफिक्स प्रविधि अद्वितीय सुविधाहरू, एक नम्बर द्वारा समर्थित सुविधाहरू। CrossFire प्रविधि अतिरिक्त क्षमता प्रदान गर्न जस्तो अनुमति दिन्छ अन्य उपयुक्त असतत ग्राफिक्स कार्ड निर्माता संग संयुक्त गर्न एकीकृत ग्राफिक्स प्रोसेसर। यो सुविधा पूर्वनिर्धारित BIOS ASRock सक्षम छ, त्यसैले पर्याप्त एक भिडियो कार्ड सम्मिलित र AMD A8-3850 चालक संग अभिभावक कार्ड बाँकी गर्छन्। त्यहाँ केही सीमितता छन्। प्रविधिलाई DX9 दोहोरो ग्राफिक्स समारोह संग DirectX 11 र 10 समर्थन गर्ने खेल काम गर्छ, तर यो मामला मा प्रदर्शन गर्न इष्टतम छ। पहिलो पटक वास्तुकला Llano निर्माता संग जो तपाईं सीपीयू र GPU बीच workloads विभिन्न वितरण गर्न अनुमति दिन्छ एक असिन्क्रोनस बहु प्रतिपादन, देखाउनुभयो। यो सहित HD 6670 1 जीबी, HD 6570 1 जीबी, HD 6450 512MB र HD 6350 512 एमबी मात्र कम GPU AMD देखि अनुकूलता राख्छ।
AMD A8-3850 ओभरक्लकिङ
देख्न सकिन्छ रूपमा, आर्किटेक्चर लिन्कस उत्साही प्रदर्शन उद्देश्य छैन। फलस्वरूप, AMD A8-3850 प्रोसेसर ओभरक्लकिङ क्षमताहरु पनि सीमित छन्। उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्ताहरूले तपाईं निर्मित इंटेल को डिजाइन प्रतिलिपि भनेर सिक्न खुसी थिए। यो बोर्ड मार्फत सबै घडी दर प्रत्येक अन्य जडान भएका छन् भन्ने हो। Sandy पुल प्रणाली मा देख्न सकिन्छ, यो सेटिङ, वास्तवमा, यो (हामी Apu Llano कुरा भने वा सन्दर्भ,) असम्भव आधार दर मार्फत overclock गर्न, तिनीहरूले SATA subsystems र USB मा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ 5% भन्दा वृद्धि रूपमा बनाउँछ छ । AMD A8-3850 गति 2,9GGts नाघ्यो कि श्रृंखला प्रोसेसर सीपीयू एक अवरुद्ध कारक सानो आशा 100-मेगाहर्ट्ज सन्दर्भ घडी र 29x गुणक आधारित भन्ने तथ्यलाई दिइएको।
तर प्रयोगकर्ताहरूले Motherboard ASRock A75 Pro4, तिनीहरूले परीक्षणको लागि प्रयोग जो 3.6 GHz को कुल आवृत्ति परिणामस्वरूप, 36x गर्न गुणक बढेको छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा चासो छ। तथापि, भए तापनि सीपीयू-Z माथिको मान को उपलब्धि रिपोर्ट, को गुणक वास्तवमा परिवर्तन छैन। परीक्षण परिणाम 2.9 GHz मा समान प्रदर्शन मापन थिए। 630 मेगाहर्ट्ज सम्म - प्रयोगकर्ता मात्र 3.4 GHz को मान गर्न प्रोसेसर को आवृत्ति मा वृद्धि र GPU गर्न नेतृत्व जो5मेगाहर्ट्ज को वृद्धि, हासिल गर्न व्यवस्थित रूपमा AMD A8-3850 overclock गर्न प्रयासहरू, लगभग निरर्थक थिए। निर्माता अनुसार, यो motherboards को केही ठूलो प्रवेग अनुमति, SATA र USB ब्लक गर्ने क्षमता भन्ने तथ्यलाई कारण छ। एउटै स्रोत केही बोर्डहरू केही आवृत्तियों मा SATA र USB समर्थन समावेश कि अदृश्य विभाजक छ भनेर दाबी। यो उदाहरणका लागि, मतलब हुन सक्छ, कि जब 120 मेगाहर्ट्ज मा एक स्थिर ओभरक्लकिङ AMD A8-3850 मा 133 मेगाहर्ट्ज परिणाम, एक ठूलो सन्दर्भ घडी एक उच्च विभक्त SATA / USB को प्रयोग शुरू किनभने बस हासिल गर्न सकिन्छ।
प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया अनुसार, यो जानकारी Motherboard 105 मेगाहर्ट्ज माथि कुनै पनि सन्दर्भ आवृत्तियों बुट गर्न इन्कार किनभने, ओभरक्लकिङ धेरै उपयोगी थियो लागि हो।
यो परीक्षण एकदम को CPU लोड फोटोरियलिस्टिक विचार, volumetric रोशनी र प्रक्रियागत shaders संग अत्यधिक जटिल दृश्य प्रतिपादन लागि म्याक्सन गरेको सिनेमा 4D प्रयोग गर्दछ। यो त्यस्तो स्पाइडरम्यान र स्टार वार्स रूपमा चलचित्र देखा वास्तविक संसार वस्तुहरु समावेश भएकोले Cinebench R11.5 एक वास्तविक परीक्षण वातावरण देख्न सकिन्छ। प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया अनुसार, यो 2.9 GHz मा 3.33 अंक र 3.04 गीगा मा 3.51 अंक सीपीयू गोल गरेका थिए। यसरी कोर प्रतियोगी і3-21003अंक गोल गरेका थिए।
यो बहु-पिरोया परीक्षण counterintuitive गणितीय वर्ग जरा, केवल संख्या को प्रयोग संग गणना छ। एक मानक परीक्षण मा, 32 लाख संख्या एक सेट प्रयोग र मूल्याङ्कनमा समारोह रूपमा न्यूटन तरिका को एक दोहोरिने कल तिनीहरूलाई प्रत्येक को वर्ग मूल गणना। WPrime पूर्ण धेरै कोर गर्न आरोहण र केन्द्रीय प्रशोधन एकाइ 100% पूर्णतया तिनीहरूलाई लोड हुन सक्छ। उप योगफल गणना 32 लाख संख्या सम्पूर्ण सेट को वर्ग मूल फेला मा खर्च समय रकम व्यक्त गरे। को अङ्क प्रदर्शन तल्लो, राम्रो। प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिक्रिया, AMD A8-3850 परिणाम - 14.443 ग र 13.635 ग (2.9 मा र 3.04 गीगा)। कोर і3-2100 अब ठान्नुहुन्छ। सबै हिसाब इन्टेल प्रोसेसर 18,090 सेकेन्ड बिताउनुहुन्छ।
बाँकी4मृत 2
प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया, 1280 x 720,0x एए, वायुसेना 16x र उच्च छवि गुणस्तर सेटिङ को संकल्प मा खेल को सुरु को लागि कम्तिमा 54 र 2.9 GHz घडी आवृत्ति मा एक / सी 76 को एक औसत र क्रमशः 60 र 80 कश्मीर / को हासिल गर्न अनुमति दिन्छ 3.04 गीगा गर्न overclocked। प्रोसेसर कोर і3-2100 फ्रेम दर 13 र 22 कश्मीर / को प्रदान गर्दछ।
कल अफ ड्युटी: ब्ल्याक अप्स
प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया अनुसार, खेल खेल मेनुमा विवरण अधिकतम को स्थापना संग परीक्षण गरिएको छ। उच्चतम आवृत्ति पूर्वनिर्धारित फ्रेम 91 च / को सीमित गरिएको छ, यो 250 वृद्धि गर्न गर्न / कन्फिगरेसन फाइल देखि भएको थियो। एक बहु खेल को 90-दोस्रो खण्ड शुरू, अघिल्लो परीक्षण समान एकाइहरु निर्माण उत्कृष्ट प्लेयर मार्फत प्ले, 30 कश्मीर / s को सबै भन्दा कम ताजा दर देखाए, र यसको औसत मूल्य 54 कश्मीर / को थियो। को dispersed डाटा प्रोसेसर सूचकांक गर्न क्रमशः 33 प्रतिशतले वृद्धि भएको र 60 कश्मीर / को। प्रतिद्वन्द्वी इंटेल कोर प्रोसेसर प्रदर्शन अस्वीकार्य 11 र 20 च / s।
सबै प्रदर्शन परीक्षण, प्रयोगकर्ता प्रोसेसर गाइड जसको लागि, बन्द सबै शक्ति बचत प्रविधि, तपाईं पर्याप्त परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन् र सबै भन्दा राम्रो सम्भव प्रदर्शन संकेतक प्रदान गर्न भनेर चलाउन यस्तो SpeedStep इंटेल रूपमा प्रविधिहरू, एक microsecond, आवश्यक भन्ने तथ्यलाई बावजुद कटौती थिए, केही अवस्थामा जो सक्छन् प्रभाव। तथापि, पूर्णतया वास्तविक शक्ति खपत निर्धारण सक्छ बाह्य शक्ति मीटर प्रयोग गर्न उपयोग सम्पूर्ण कार्यात्मक मा AMD A8-3850 प्रोसेसर शक्ति खपत विशेषताहरु आकलन गर्न, त्यसैले परिणाम प्रणाली को कुल शक्ति भन्दा को CPU को शक्ति खपत प्रतिनिधित्व गर्छ। पीसी को कुनै पनि विशेष घटक को खपत को अलग मिटरिङ्ग व्यावहारिक असम्भव छ।
प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया अनुसार, स्ट्यान्डबाइ मोडमा पीसी स्क्रिन तर सक्रिय र Aero संग Windows7डेस्कटप केही छ जब AMD A8-3850 Quadcore आधारित प्रणाली को कुल खपत 47 वाट छ, र इंटेल कोर і3-2100 - 40 वाट। लोड अन्तर्गत परीक्षण मोडेल गर्न सीपीयू र GPU रूपमा हुँदा विश्लेषण प्रोसेसर दक्षता 92 वाट को परिणाम दिनुभयो। वाट मात्र 66 - प्रतियोगिहरु यस आंकडा धेरै सानो थियो।
तुलना लागि, AMD A8-3850 परीक्षण परिणाम і3-2100 कोर प्रोसेसर प्रयोग यस्तै मूल्य मा बेच र दुई परीक्षण खडा लागि सिस्टम को कुल लागत यस्तै थियो भनेर तुलना motherboards चयन गरिएका छन्। अनुमानित मोडेल को प्रदर्शन प्रतिद्वन्द्वी इंटेल को 11,5 (3,33) 0,33 अगाडि Cinebench यसको स्कोर रूपमा, सुरु राम्रो जाँच गर्नुहोस्। यस्तै अवस्था WPrime 32m परीक्षण मा उठ्दा। समय 14,443 संग A8-3850 प्रोसेसर प्रतियोगिता, जो को परिणाम को टाढा अगाडि संग - 18,090 संग। यो कारण कोर को दुई पटक नम्बर मा निहित। यी परीक्षण प्रदान थप क्षमता अधिकतम लाभ यो छ।
मल्टिमिडिया फाइलहरू प्रक्रिया को रूप मा थप toughest परीक्षण लिन्छ multiprocessor गणनाको फाइदा, तर पनि प्रति घडी चक्र थप निर्देशन प्रदर्शन कि प्रोसेसर इनाम दिनुहुन्छ। को Sandy पुल वास्तुकला वृद्ध वास्तुकला K10 भन्दा धेरै डाटा प्रशोधन गर्न सक्षम छ किनभने і3-2100 चिप, यस क्षेत्रमा हावी छ।
49% राम्रो थियो जो 1331 अंक, - परीक्षण छवि सम्पादन A8-38502GHz 90 मा 888 र i3-2100 AMD प्रशंसा गरे। एउटै भिडियो कोडिंग, सामान्यतया थप कोर संग प्रोसेसर इनाम दिनुहुन्छ जो 28% द्वारा lagged A8-3850 संग, अन्य परीक्षण मा बारम्बार थियो। कुल दर्जा A8-3850 को Intel CPU मा 1476 अंक को टाढा छोटो पतन जो 1059 अंक, totaled।
तथापि, Apu Llano को मुख्य लाभ, प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिक्रियाहरू मा,3डी-खेल मा यसको सुधार प्रदर्शन हो। उहाँले एक सस्तो खेल पीसी लागि आधार बन्न सक्छ? वा GPUs प्रवेश स्तर बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ? दुवै प्रश्नहरूको जवाफ एक शानदार "हो!" हो।
L4D2 मा0x एए प्रोसेसर AMD A8-3850 Apu संग 1280 720 स्क्रिन डट्स को एक संकल्प मा न्यूनतम फ्रेम दर 54 कश्मीर / को बराबर एक उच्च स्तर मा स्थापित सेटिङ प्रदान गर्दछ। यो जो अब अन्तमा, एक घर थिएटर सिस्टम निर्माण गर्न मौका, तपाईं को लागि एक अलग ग्राफिक्स कार्ड आवश्यकता बिना 720 मा प्ले गर्न दिन्छ भन्ने हो एक उत्कृष्ट परिणाम छ। तुलना लागि, न्यूनतम आवृत्ति i3-2100 प्रोसेसर नै सेटिङहरू मा 13 / को शट व्यावहारिक खेल्न अनुमति छैन। L4D2 मा A8-3850 खेल पनि राम्रो एक उच्च परिभाषा छवि काम गर्दछ। 1680 x 1050 पिक्सेल Apu को एक संकल्प मा 33 कश्मीर / s को न्यूनतम फ्रेम दर, पनि लाश को आक्रमण समयमा प्ले सहज अनुमति दिन्छ जो प्रदान गर्दछ। यो Llano आधारित प्रणाली साँच्चै प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, तपाईं मानक परिभाषा प्रदर्शन को विकर्ण मा कम चित्रात्मक माग खेल चयन भने 22 इन्च। खेल कड: ब्ल्याक अप्स पनि पिक्सेल प्रोसेसर ह्यान्डल एक ठूलो संख्या अब सक्षम छ हुनत, 1280 x 720 एए बिना को संकल्प स्वीकार्य परिणाम देखाउनुभयो।
3 डी प्रदर्शन मूल्यांकन तस्वीर देख्न रूपमा प्रतिस्पर्धा कम्पनीहरु को चिप्स बीच थप सूक्ष्म भिन्नता। खेल मा ग्राफिक इंटेल i3-2100 प्रोसेसर खेल सबै सेटिङ नै हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद जो AMD सिस्टम मा देख्न सकिन्छ केही नरम छाया, सामना गरेनन्। किनभने उनीहरू खेल वातावरणमा गहिराई र यथार्थवाद थप्न यी छाया को हानि तुरुन्तै आँखा परिहाल्छ।
AMD A8-3850 प्रोसेसरको तकनीकी विशेषता 1333 मेगाहर्ट्जको अपरेन्टिभ आवृत्तिको साथ DDR3 मेमोरी प्रयोग गरी अनुमान गरिएको थियो। यसको कारण, परिणामहरूको तुलना निष्पक्ष हुन्छ। यद्यपि, यो जाँच गर्न रोचक छ कि A8-3850 को प्रदर्शन छिटो रामको प्रयोगबाट बढ्न सक्छ कि। साथै, ग्राफिक्स प्रोसेसरले मध्य एक साथ RAM लाई विभाजित गर्दछ। छिटो मेमोरी उपकरणको प्रयोग यसको विचलित ग्राफिक्स कार्डमा overclocking सँग तुलनात्मक हुनुपर्छ।
यो व्यवहारमा पुष्टि गरियो। प्रयोगकर्ताहरूका अनुसार, DDR3 को 1.6 GHz को आवृत्तिमा वृद्धिले3डी को प्रदर्शनमा सुधार गर्यो। त्यही समयमा न्यूनतम फ्रेम दर64psले L4D2मा 1680 x 1050 बिन्दु र ब्ल्याक ओप्समा3एफपीएसको रिजोल्यूशनमा बढेको छ, जसलाई यसको कम गुणस्तर बढाइयो। दिलचस्प छ, रैम को 1600 मेगाहर्ट्ज को आवृत्ति मा वृद्धि प्रोसेसर को अधिक overclocking भन्दा अधिक प्रभावित।
AMD A8-3850 को सकारात्मक विशेषताकरण को प्रतिरोध गर्न असंभव छ, यसको उपस्थिति संग, पुरा तरिकाले एकीकृत ग्राफिक्स, उचित प्रदर्शन प्रदान गर्न को लागी, अंततः उपलब्ध थियो। एपीयूले कम र मध्यम रिजोल्युसनमा गेमिंग परीक्षणमा यसको स्थिरता साबित गर्यो, भले पनि सबै अन्य सेटिङहरू अधिकतम सेट अप भएमा। यसले एएमडी सीरीज एक प्रोसेसरलाई कम स्वागत मिडिया मिडिया केन्द्र वा सानो सानो मनिटरसँग जोड्नको लागी एक बजेट गेमिङ स्टेशनको लागि स्वागत अधिग्रहण गर्दछ। एक रोचक समाधान asymmetric CrossFire, जुन एक सस्ती हाइब्रिड प्रोसेसर मा उच्च प्रदर्शन प्राप्त गर्न को लागी एक असाइन ग्राफिक्स कार्ड आधार स्तर संग, हुनत केवल खेल DX10 / 11 को लागि केवल एक महत्वपूर्ण रोकथाम को प्रतिबंध छ। यो देखिन्छ कि A8-3850 ले ग्राफिक्स प्रोसेसर बजार अनावश्यक आधार आधार को बनाईयो। र यो परिणाम हो कि प्रयोगकर्ताहरू सबै भन्दा खुसी छन्।
दुर्भाग्यवश, सबै केहि यति उज्ज्वल छैन। मल्टीमीडिया परीक्षणमा एएमडी ए 8-3850 प्रोसेसरको कम प्रदर्शनको रूपमा , यो मोडेल मूल्यमा ेल 3-2 99 1 को अनुरूप इंटेल चिपको पछि लाग्छ। जाहिर छ, यो छविहरू सम्पादन गर्दा वा भिडियो एन्कोडिङ गर्दा एउटा समस्या हुनेछ। यद्यपि, प्रयोगकर्ताहरूको अनुसार, सुधारिएको ग्राफिक्स प्रदर्शनको बीचमा मध्यम बदतर मिडिया प्रदर्शनको आदानप्रदानको बीचमा एक सम्झौता अधिकांश मामलाहरुमा उचित छ, विशेषगरि यदि यस्तो प्रणाली भविष्यमा वितरित गरिन्छ।
एक सस्ती पीसी को आवश्यकता हो, केवल एक कार्यालय कम्प्यूटर या होम थियेटर, एक थोडा देर को लागि एक गेमिंग स्टेशन बनने को क्षमता मा, A8-3850 मा एक आदर्श विकल्प मिल जाएगा, किनकी प्रोसेसर i3-2100 के आधार पर असंगत GPU के साथ सिस्टम की तुलना में बहुत कम लागत होगी। AMD chipset को उच्च प्रदर्शन प्रदान गर्न को लागि पर्याप्त शक्ति भन्दा अधिक छ र एक ठोस ग्राफिक्स प्रोसेसर को फायदे छ, जो आवश्यक 3D प्रदर्शन को समर्थन को लागि पर्याप्त छ।
किन युएसबी-नियन्त्रक लागि आवश्यकता
एक SSD के हो? उच्च प्रविधिहरू विकास एक नयाँ कोसेढुङ्गो
आफ्नो हातले "दानव उच्च" ओछ्यानमा लागि कठपुतलीहरू कसरी बनाउने?
म एक लेखापाल पात्रो किन चाहिन्छ?
Mugwort एलर्जी: के, कसरी उपचार गर्ने?
कोठरी duhovochnom मा पनीर र टमाटर संग फ्रेंच मासु
Nizhny Novgorod मा रेडियो स्टेशन - प्राण र हृदयमा संगीत!